Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV ingafika kule veki | Ndisuka mac
NgoJuni ophelileyo, uTim Cook uqinisekise ngokusungulwa okuzayo kwesicelo seAmazon Prime Video seApple TV, isicelo esithe ngenxa ye "ngxaki" phakathi kwezi nkampani zimbini zazingekabikho kwi-set-top box ka-Apple. Ukuqaliswa kwesi sicelo kufanele ukuba kwenzeke ngexesha lenqaku lokugqibela, intetho ephambili apho iApple yazisa ngokusesikweni iApple TV 4k entsha, isixhobo esele sikhona kwimarike. Kwiintsuku ezingaphambi kokubhiyozelwa kwala mazwi aphambili, siphindaphinde isaziso esathi isicelo seAmazon seApple TV asizukulunga, kwaye njengoko sasibona. Kodwa kubonakala ngathi ukulinda kugqityiwe.
Ngokwimithombo enxulumene neAmazon, inkampani kaJeff Bezos iceba ukwenza yazisa usetyenziso lweVidiyo yeNkulumbuso yeApple TV phambi ngoLwesine olandelayo Usuku ekubhiyozelwa ngalo ubusuku bebhola ekhatywayo, isivumelwano ekufikelelwe kuso yinkampani ukusasaza bukhoma eminye yemidlalo yeNFL yaseMelika, isivumelwano esikwizandla zeTwitter. Njengesiqhelo kula matyala, akukho siqinisekiso saseburhulumenteni sokuba ingaba olu lwazi luyinyani na okanye alunjalo, kodwa iyavakala, kuba ukulibaziseka kuphuhliso lwesicelo kusibonisile umhla wokuphehlelelwa ophela ngoSeptemba.
Ukongeza, ukuba iAmazon ifuna ukuthatha ithuba lokutsala imidlalo yeNFL kwaye ivumele abalandeli beAmazon Prime Vidiyo kunye neApple TV ukuba bayonwabele kwiscreen esikhulu samakhaya abo, kunokwenzeka ukuba ukumiliselwa kwesicelo kwenzeka ngomso okanye ngosuku olulandelayo, ukuze iindaba zifikelele kwelona nani liphezulu labantu abanokubakho kwaye baqale ukonwabela yomibini imidlalo ye-NFL kunye nothotho kunye neemovie ezinikwa ngumdlalo wevidiyo weAmazon okwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ividiyo enkulu yeAmazon yeApple TV ingafika kule veki
Ngaba iyakusebenza nge-tv endala ye-apile?